Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » British Airways: Tsy misy andriambavy sy tompokovavy intsony
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
Ny fanovana ny politikan'ny British Airways dia natao hialana amin'ny fanavakavahana ireo mpandeha izay tsy tafiditra ao anatin'ny sokajy roa, toy ny ankizy, ary koa ny “fanajana ny fenitra ara-tsosialy vaovao.”
British Airways dia mandidy ny mpanamory fiaramanidina mba tsy hiantso ny mpandeha fiaramanidina ho 'tompokolahy sy tompokovavy' intsony.
Ny fanovana ny politikam-piaramanidina British Airways dia nantsoina ho toy ny fanoherana ny 'fampidirana sy fahasamihafana'.
Tsy mbola fantatra mazava ny fomba hitsena ny mpandeha ao amin'ny British Airways fa tsy 'tompokolahy sy tompokovavy' nentim-paharazana.
British Airways no lasa zotram-piaramanidina farany nahavoa ny fahitsiana ara-politika nifoha ary nanolo ny fiarahabany nentin-drazana efa zato taona lasa miaraka amin'ny fomba hafa tsy mitongilana.
The UK Nanome torolàlana ny mpanamory fiaramanidina azy ny mpitatitra saina mba tsy hiantso ny mpandeha intsony hoe "tompokolahy sy tompokovavy", mitazona ny fiarahabana fa tsy miandany amin'ny lahy sy ny vavy kosa.
Ny fanovana ny politika dia nantsoina ho toy ny fanekena ny “fampidirana sy ny fahasamihafana.”
Ny fanovana ny politika dia natao mba hisorohana ny fanavakavahana ireo mpandeha izay tsy tafiditra ao anatin'ny sokajy roa, toy ny ankizy, ary koa "ny fanajana ny fenitra ara-tsosialy vaovao."
The British Airways ny mpitondra teniny dia toa nanamafy ny firosoana amin'ny “awak speak,” nanamarika ny fanoloran-tenan'ilay orinasa amin'ny “fampidirana sy fahasamihafana.”
"Manolo-tena izahay hanome antoka fa ho tian'ny mpanjifanay rehetra rehefa miaraka aminay," hoy ny mpitondra tenin'ny kaompaniam-pitaterana.
Tsy nandeha tsara ny fanambarana UK mpaneho hevitra mpiorina mpandala ny nentin-drazana. Ny sasany dia tonga nanambara ny fanapahan-kevitr'ilay mpitatitra handroaka ilay fehezanteny, hita hatramin'ny ela ho endrika adiresy mahazatra sy fahalalam-pomba, “fanafihana” ny toetra amam-pirenena anglisy.
Raha mpandeha mitaingina a British Airways Tsy handre “andriambavilanitra” intsony ny sidina, tsy mazava ny fomba hitondrana ireo mpandeha an'habakabaka handroso, fa ny zotram-pitaterana an'habakabaka dia "namporisika ny mpanamory fiaramanidina hitondra ny toetrany manokana amin'ny fanambarana an-tsambo."
Alan Phipps hoy:
Oktobra 13, 2021 ao amin'ny 09: 59
Azoko tsara ny faniriana hampiditra fa ahoana kosa ny amin'ny fomban-drazana sy ny fomba fanao anglisy taloha? Ka izao dia mety maheno isika hoe “Tongasoa eto an-tsambo mpandeha olona miaraka amina Tompokolahy sy Tompokovavy, ankizy ary ireo mpandeha LGBT miaraka amina faritra maro samihafa eo amin'ny fiarahamonintsika !! ”
Endrey izany vesatra hadalana !! Fiarahabana lava sy lava be nataon'ny kapiteny. Ahoana no ahatongavan'ity brigady WOKE ity amin'ny toerana itarihany fanovana toy izany? Inona no nitranga tamin'ny Britanika?